Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - hfm-alakamisy
Alakamisy Ny haren’ny Teniny
Moa efa nandramanao ve ny herin’ny tenin’Andriamanitra?
Maro amintsika no efa nanandrana ny hery sy ny haren'ny Tenin'Andriamanitra. Afaka miaiky isika fa ny "Tenin'Andriamanitra dia velona sady miasa" ary "maranitra mihoatra noho ny sabatra roa lela" (Heb. 4:12). Manana hery mitarika antsika ho eo amin'i Jesosy Mpamonjy antsika ny Tenin'Andriamanitra, ary manova ny fiainantsika mba hitovy amin'ny an'i Kristy, manome antsika fomba fijery vaovao. Misy ireo izay, nandritra ny taona maro, dia nanao fahitana mihintsy ny amin'ny herin'ny Tenin'Andriamanitra izay mitondra fifohazana. Iray amin'izy ireny i Daniela.
Taonjato faha-enina TK izany. Very ny tanin'ny vahoakan'Andriamanitra dia i Jerosalema, sy ny Tempoly ary ny asa fanompoana tao aminy. Tsy maintsy nivelona tany amin'ny firenena hafa ireo niaraka tamin'ireo olona hafa mpanompo sampy.
Tao anatin'ireo vahoaka an'Andriamanitra no nisy an'i Daniela.
Nitombo tao anatin'ny asa fanompoana tao amin'ireo mpanjaka Babiloniana i Daniela, nanana andraikitra izay nitondra akony tsara tao amin'ny lapan'ny mpanjaka izy ary tena nijoro ho mpijoro vavolombelona mahatoky ho an'Andriamanitra Velona. Eny na dia tao aorianan'ny 70 taona lasan-ko babo aza dia tsy nitongilana tamin'ireo foto-kevitra tsy ara-baiboly izay nahazatra ny kolo-tsaina nisy azy izy akory. Nitoetra tamin'ny fanarahana an'Andriamanitra izy ary nikarakara ny ho avin'ireo vahoakany.
Ao amin'ny Daniela 9 dia hitantsika izy eo ambanin'ny lalànan'ny Mediana sy Persiana, izay naharesy ny Babilona. Ao amin'ny andininy 1 sy faha-2 dia mivaky toy izao: “Tamin’ny taona voalohany nanjakan’i Dariosa. . . zaho Daniela nahalala tamin’ny boky ny isan’ny taona nampahafantarin’ny tenin’i Jehovah an’i Jeremia mpaminany, izay hahataperan’ny fito-polo taona amin’ny hahafoanan’i Jerosalema.”
Mety nanana ireo antontan-taratasy misy ny Testamenta taloha i Daniela, tao anatin'izany ny bokin'i Jeremia. Ireo taratasy Ireo dia azo avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra (Dan. 9:2). Ao amin'ny andininy faha 11-13 Daniela dia miresaka ny amin'ny “Lalàn'i Mosesy” sy ny "teny manohitra anay", izay tsy inona fa ny Tenin'Andriamanitra hita ao amin'ny Deoteronomia 28 sy 29, ireo fitahiana sy ozona. Nianatra ny Soratra tamim-pitandremana sy fieritreretana lalina i Daniela.
Takatry Daniela fa ny faminanian'i Jeremia dia eo an-dàlam-pahatanterahana ary i Joda koa dia ho averina ho amin'ny Tany Nampanantenaina. Teo am-pamakiana sy fianarana ny Soratra Masina, i Daniela dia nahalala ny sitrapon'Andriamanitra, nifantoka tamin'izay nambarany, ary nitoky tamin'izany faminaniana masina izany. Hitany ny famantarana tamin'ny androny. Tsikariny fa ny sedra ho atrehan'ny vahoakan'Andriamanitra dia ho avy tsy ho ela. Ankilan'izany, ireo izay nahafantatra azy dia nahita avy hatrany fa feno ny Fanahin'Andriamanitra ny fiainany. (Dan. 4:8, 9, 18; 5:11, 12, 14; 6:3).
Nivavaka i Daniela
Sady mitarika ho amin'ny fijery lalin-dalina kokoa ny fianarana ny Soratra ny amin'ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny zanak'olombelona, no mitarika ho amin'ny vavaka. Ao amin'ny Daniela 9:3-19 dia namelatra ny fony tamin'Andriamanitra i Daniela tamin'ny fiaiken-keloka sy fangatahana, nalahelo tanteraka an'ireo vahoaka izay nivadika tamin'Andriamanitra. Tsapany ny fahamarinan'Andriamanitra izay mitondra ny fahatanterahan'ny ozona izay voambara. Na izany aza anefa dia mbola nitoky tamin'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahasoavany foana izy (and. 4, 18) ary nangataka ny famelan-keloka avy aminy. Namarana ny vavaka izay nataony tamin'ny fangatahana ny famerenana amin'ny laoniny indray ny Tempolin'ny Jerosalema izay rava izy. Nangataka fanamboarana sy fanombohana vaovao indray izy.
Eto isika dia mahita tranga goavana: nianatra ny Teny i Daniela; nitarika azy nanana fijery lalina kokoa izany; ary raha mbola hatambatra (jereo Dan. 8:27), nitodika tamim-bavaka tamin'Andriamanitra izy. Ohatra ho antsika izany. Ny vaha-olana ho antsika dia ny Tenin'Andriamanitra sy ny vavaka. Raha tiantsika ny hanana fanombohana vaovao eo amin'ny fiainantsika ara-panahy, ny hitombo fifandraisana amin'i Jesosy, ny ahatakatra an'Andriamanitra lalin-dalina kokoa,, ny ahazo ny drafitr'Andriamanitra ho antsika sy ny taranak'olombelona, na ny hamantatra ny amin'ny ho avy, dia manampy antsika be dia be ny Soratra Masina sy ny fianarana ary ny vavaka ho amin'izany.
Raha mbola nivavaka i Daniela, dia namaly azy sady nandefa ny anjely Gabriela taminy Jehovah (Dan. 9:20, 21). voalaza fa i Daniela dia “malala indrindra” (and. 23).
Taitra amin'ny vavaka asandratry ny zanany Andriamanitra. Mety tsy handefa anjely hita maso Izy na koa hoe nofy, fa manokatra ny masontsika Izy ahita azy, ny asany, ary ny fidirany an-tsehatra, mampiasa ny namantsika Izy hamonjy antsika, manodidina antsika ny fiadanany, ary fenoiny fahatokisana isika.
Nandray “fahalalàna sy fahazavan-tsaina” (and. 22) i Daniela. Nambaran'i Gabriela taminy ny amin'ny 70 herin'andro sy ny 490 taona. Amin'ny faran'izao fetr'andro izao dia ho avy ny Mesia ka “hahatapaka ny fahadisoana sy hanampina ny fahotana, ary hanao fanavotana noho ny heloka sy hampiditra fahamarinana mandrakizay, ary hanisy tombo-kase ny fahitana sy ny faminaniana sy hanosotra izay masina indrindra” (and. 24). Tsy nianatra ny amin'ny drafi-panavotana izay tsy mbola tena nazava tsara taloha akory i Daniela, fa koa natodika hijery ny Mesia, ny asam-panavotany, sy ny fahafatesany. Nandray "fahazavana vaovao" i Daniela. Fa nitombo ihany koa izany fahazavana izany—ary nifandray tamin'ireo—fahazavana izay noraisin'ireo mpaminany teo alohany. Tsy nahakasika ny amin'ny fotoana sy ny famantarana ho amin'ny ho avy ihany akory—fa mahakasika an'i Jesosy Kristy.
Ny fifohazana ho amin'ny fianarana Baiboly marina dia mitarika ho amin'ny fahatakarana misimisy kokoa ny amin'ny Tenin'Andriamanitra. Rehefa mianatra ny Teny, amim-bavaka isika, dia handray fahazavana vaovao.
Inona moa izany fahazavana vaovao izany? Matetika dia miaraka amin'ny fahitana fahamarinana izay tsy tena fantatra mazava izany. Ireo Advantista taloha, dia nahita, ohatra, ny amin'ny fototry ny taberinakely sy ny hafatra momba ny fahasalamana. Natao handikana hevitra ao amin'ny Baiboly ihany koa izany fahazavana izany. Fa ny fahazavana lehibe dia tsy natao ho an'ny fiangonana fotsiny ihany. Manana anjara asa ho an'ny tena manokana ihany koa izany. Ireo olona izay mianatra ny Teny dia mahazo fitarihana manokana. Sady mapavitrika, no mahaliana, no mahazo fahalalana.1
Nahoana no manome fahazavana vaovao ho antsika Andriamanitra? Amin'ny fahafantarana misimisy kokoa ny lasa, ny ankehitriny ary ny ho avy dia mianatra ny mankasitraka ny drafitry ny famonjena isika. Faly isika rehefa mahita ny asan'Andriamanitra mitondra fitsaharana ho an'ny fahotana, ny fahoriana ary ny fahafatesana ary mandray antsika hody any aminy. Ambonin'ny zava-drehetra, ny fahazavana vaovao dia mitarika antsika ahafantatra an'Andriamanitra sy ny mitia Azy ary manana fifandraisana velona miaraka Aminy.
Ny fahazana vaovao tena marina dia hita amin'ilay antsoina hoe fahazavan'ny fanenjehana. Ataontsika izany amin'ny fijerena ny Teny. Ny Fanahy Masina dia tsy handrafy na oviana na oviana ny Tenany ao amin'izay nampianariny. Miaraka mandinika ihany koa amin'ireo vondron'olona tena mino marina. Raha amin'ny fandinihanao manokana indray, matetika isika dia mianatra an-kapobeny fotsiny ary miezaka miala ny fifandirana. Tsy heverintsika fa ambony ny tenantsika. Ary avelantsika ny Soratra Masina hitoetra "ho ohatra ho an'ny toetra, fitsapana ho an'ny fanandramana, baiko manambara ny amin'ny foto-pinoana, ary fanambarana azo antoka ny amin'ny asan'Andriamanitra teo amin'ny tantara". 2
Ny fanandraman'i Daniela dia mampianatra antsika fa zavatra goavana no hitranga raha mianatra am-pahatokiana ny Teny isika ary mitady an'Andriamanitra amim-bavaka. Hisy fijery vaovao, indraindray somary mivelatra, indraindray manokana. Na dia mila mijanona misokatra amin'ilay fahazavana vaovao aza isika, dia tsy tokony hamela ny kolotsaina hametra ny faharesen-dahatra ananantsika izany. Vao maika aza tokony hampitaha ny fijery vaovao amin'ny Teny isika, ary raha mahita fa marina izany, dia manaraka.
Maniry ny hamoha antsika Andriamanitra, hanova antsika, ary hanatsara ny fiainantsika. Maniry ny hiaina miaraka amintsika Izy, eny ao anatintsika mihitsy, mba hitomboantsika hatanjaka amin'ny fitiavana sy ny finoana, ny fanompoana ary ny faharetana (Apôk. 2:19). “Rehefa mifanaraka tsara amin'ny Teny ny fo, dia hisy fahazavana vaovao eo amin'ny teny rehetra, hisy fiainana vaovao hiboiboika avy ao aminao, ary ho lasa feon'Andriamanitra miteny amin'ny fanahinao izany.”3.
Hieritreretana sy ho zaraina
1. Nianatra ny Teny tamim-bavaka sy fandinihana lalina I Daniela. Inona tao amin’ny baiboly no nianaranao ka nanampy anao manokana teo amin’ny fiainanao?
2. Ny fahazavana vaovao dia manampy antsika ahatakatra ny Teny sy ny fampianarany misimisy kokoa. Ahoana ny hanampian’izany antsika hioatra ny fahoriana sy ny olana eo amin’ny fiainantsika? Ahoana no hanehoan’izany amintsika ny fitiavan’Andriamanitra?
Voambolana: MANIRY NY HAMPIFOHA ANTSIKA ANDRIAMANITRA, HANOVA ANTSIKA, ARY HANOME FAHASOAVANA NY FIAINANTSIKA
Ekkehardt Mueller dia tale mpitondra teny ao amin’ny fampianarana fikarohana ara-baiboly
1 Miresaka ny amin'ny “fahamarinana ankehitriny,” Ihany koa ny Advantista,
2 Foto-pinoana No. 1.
3 Ellen G. White, Fanabehazana kristianina, p. 80.